“Wasaaradaha iyo Hay’adaha dalka oo dhami qorshe ay ku kala joogaan shaqadooda iyo mid ay ku wada shaqeeyaan malaha….” Wasiirkii hore ee Hawlaha guud | Berberanews.com
Home WARARKA “Wasaaradaha iyo Hay’adaha dalka oo dhami qorshe ay ku kala joogaan shaqadooda...
“Wasaaradaha iyo Hay’adaha dalka oo dhami qorshe ay ku kala joogaan shaqadooda iyo mid ay ku wada shaqeeyaan malaha….” Wasiirkii hore ee Hawlaha guud
Hargeysa-(Berberanews)- Wasiirkii hore ee Wasaaradda Hawlaha guud, gaadiidka iyo guryeynta Somaliland Prof Ismaacil Muumin Aare, ayaa sheegay dhibaatooyinkii ugu waynaa ee ka horyimi muddadii uu xilka Wasaaraddaas hayey, isla markaana waxa uu shaaca ka qaaday in Shuruucdeedi duntay, Dhulkii dawladdu haysayna fareheeda ka baxay.
Prof: Ismaaciil Muumin Aare, waxa uu sheegay in Gawaadhida dayarta faraha badani ku dhex wadato Somaliland ay dhibaato badan oo halis ah ku hayaan bulshada, loona baahan yahay in sharciga la adkeeyo oo arrimahaas wax badan laga qabto. “Waxaaynu soo marnay duruufo badan, oo ay keneenay shuruucdii dalka oo dhami inay dunto. Sharcigii dawladdu faraha ayuu ka baxay oo dhulkii gacanta dawladda kuma jiro, arrintaasi waxa weeye ta dhibaatooyinka ugu waaweyni ka taagan yihiin.” Sidaa ayuu yidhi Wasiirkii hore ee hawlaha guud. Waxaanu Prof. Aare intaa ku siidaray oo uu yidhi; “Gadiidkeennii sida uu ku socdo iyo dhalinyarada yar-yar ee liisankii aad loogu fududeeyay waxay keentay in dad badani ay khatar galaan, waxa loo baahan yahay in sharciga la adkeeyo. Waxyaabahaasi waxay u baahan yihiin shuruuc aasaasiya in loo sameeyo, in la giijiyo oo sharciga la adkeeyo.”
Prof: waxa uu sheegay inay jiraan shuruuc badan oo muddadii uu Wasaaraddaa joogay la bilaabay curintooda “Sida ay muujinayaan Buugaagta aan kugu wareejinayaa Shuruuc badan ayaa halkaa taalla oo laga shaqaynayey intii aan joogay Wasaaradda, waxa la diyaariyey siyaasad-qarameedka dhulka, waxa la diyaariyey Xeerarka dhulka oo dib u eegis lagu sameeyey.” Waxaanu xusay inay shuruuc badan oo kale oo ay tahay in Farsamayaqaannadu ku shaqeeyaan, Xeerarka magaalaynta iyo Xeerar kale oo la xidhiidha, sida Maababka magaalooyinka, qaabka magaalaynta iyo waxyaabo kale. Waxaanu sheegay in Guddi ka kooban toddoba Wasiir ay ka shaqeeyaan hirgelinta iyo hagaajinta hawlahaas sida ay dhigayso siyaasadda Xukuumadda ee dhinaca dhulka, magaalaynta iyo horumarinta waddooyinka iyo wixii la hal-maala.
Wasiirkii hore ee Wasaaradda hawlaha guud, gaadiidka iyo guryeyntu wuxu sheegay inay Wasaaradda haysato dhibaatooyin ka dhashay dhismayaashii ay ku shaqayn lahayd oo badi dunsan, Ismaaciil Muumin Aare oo arrintaa ka hadlayaana wuxu yidhi; “Waxyabaha Wasaaradda ka hor-yimi ama haysta waxa ka mid ah iyada oo runtii wada dunsan oo dhulkii ay ku shaqaynaysay oo dhami wada dunsan yahay.”
Waxa kale oo uu Wasiirkii hore ee Hawlaha guud sheegay inay qorshayaasha Wasaaradda ku jira uu ugu weyn yahay mashruuca Berbera Kooli-dhoor oo ay Midawga Yurub iyo Urur-goboleedka IGAD oo isku xidhaya Berbera iyo Wajaale uu bilaabmi doono bisha June ee sannadkan, kaasoo uu sheegay inuu muddo dhawr sano ah socon doono, isla markaana wax badan ku soo kordhin doono koboca dhaqaalaha dalka Somaliland. “Waxa ka mid ah Shaqaalihii oo aad mooddo waxoogaa inay yar-mirdheen, iyaga oo dedaalaya, waxa weeyaan in mooralka loo hagaajiyo, taasina dhibaatooyinka ayey ka mid tahay, in la dhiso oo la dhiirrigeliyo shaqaalahana waa arrin muhiim ah.” Sidaa ayuu yidhi Wasiirkii hore ee hawlaha guud Prof: Ismaaciil Muumin Aare.
Prof: Aare waxa uu sheegay in dhibaatooyinka ugu culus ee dalka ka jira ay tahay Shaqooyinka Wasaaradaha iyo hay’adaha kale ee dulku kala cayinayn, waxaanu yidhi; “Dhibaatooyinka Wasaaradda haysta waxa kale oo ka mid ah; Wasaaradaha dalka oo dhan iyo Hay’adaha dalku qorshe ay ku kala joogaan shaqadooda iyo mid ay ku wada shaqeeyaan malaha, hay’ad waliba siday doonto ayey wax u waddaa, markaa hay’ad waliba waxay ku shaqo leedahay oo cadi haddaanu jirin is-qabqabsiga ayaa badanaya.”
Previous articleGuddiga diiwaangelinta oo maanta Tirinta kunka qof ka bilaabay Burco iyo Taageerayaasha WADANI oo Hafiyey
Next articleEthiopian Government Warns Warring Tribes Inside Somali Region of Dire Consequences